eDeshantar News | साहित्य Archives - Page3of 17 - eDeshantar News साहित्य Archives - Page3of 17 - eDeshantar News
सिमानाको यौटा ढुंगादेश बोकी उठेको छत्यही ढुंगा ढल्यो भन्दादेश चोरी भएको छ।।१।। देश चोर्ने ठूलो चोरबसेको छ कतातिरगुहार मागेर हेरसाथीभाइ सबैसँग।।२।। जनताको जिन्दगानीसिमानामा अडेको छदायाँ ढले ढल्यो खम्बाबायाँ ढले नि नास भो।।३।। फाटो साटो बिर्सिएरराष्ट्रको मुख हेर्नुछ“भाइ फुटे गँवार लुटे”भन्ने यस्तो उखान छ।।४।। तील दाना यता पर्लातील दाना उता परोस्मनमा प्रेम राखेरभाइ भाइ सधँै हिँडोस्।।५।।…
काठमाडौं । मदन पुरस्कार–२०७६ चन्द्रप्रकाश बानियाँले लेखेको ‘महारानी’ उपन्यासलाई प्रदान गरिने भएको छ । मदन पुरस्कार गुठीको आज बसेको साधारणसभाले २०७६ सालमा प्रकाशित कृतिमध्ये ऐतिहासिक उपन्यास ‘महारानी’ लाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले जानकारी दिए । विसं २०७५ को मदन पुरस्कार पनि योगेश राजको ऐतिहासिक उपन्यास ‘रणहार’ लाई प्रदान गरिएको थियो । मदन…
प्राणीजगत्मा खानु पिउनु र निदाउनु पर्ने बाध्यता पाइन्छ । सबैलाई मीठो निन्द्रा प्यारो लाग्छ । सबै सुखत् खोजी दौडिरहेका छन् । स्वास्थ्य, सुख र खुसी पाउनको लागि परिश्रम गरेर निन्द्रादेवीको सेवा गर्नुपर्छ । अल्छी दुष्टहरूलाई तिनले सताउछिन् । निन्द्रा नपर्ने मान्छे रोगी हुन्छ । रोगीहरू उद्योगी बन्न सक्तैनन् । उद्योग नगरी कतै पनि धन आर्जन…
२०१६ सालतिर म रेडियो नेपालमा जाने गर्दथें, गीत गाउन पाइन्छ कि भनेर । त्यहाँ एउटा रिहर्सल रुम थियो, ठूलो हल, जसका भित्ताहरू ‘साउन्ड प्रुफ’ थिए । त्यहीँ एक छेउमा गाएर प्रसारण गर्ने ठाउँ थियो, माइकसहितको । पहिलो पटक त्यहाँ पुग्दा,...
राष्ट्रिय विभूति युवाकवि मोतीराम भट्टको १५४औँ जन्मजयन्ती आज विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देशभर बढिरहेकाले औपचारिक कार्यक्रम भने आयोजना गरिएको छैन । विसं १९२३ भाद्र कृष्णऔँसी अर्थात् कुशेऔँसीका दिन जन्मेर विसं १९५३ भाद्र...
दमौलीतिर हामीकहाँ एउटा व्यास गुफा छ । त्यसैनजिक एउटा पवित्र नदी पनि बग्दछ । यो गुफा देख्दा मलाई जहिले पनि लाग्दछ, कतै यही गुफाभित्र बसेर, व्यासले ‘महाभारत’को सिर्जना त गरेका होइनन् ? कारण ‘महाभारत’ ग्रन्थमा ‘जय’ अर्थात् ‘महाभारत’ रचिएको व्यासजीको...
मेरा विचारमा कविता कविताजस्तै हुनुपर्छ । कवितामा भाव हुनुपर्छ, लय हुनुपर्छ, तरङ्ग हुनुपर्छ । पढ्नासाथ एक प्रकारको आकर्षण हुनुपर्छ, सूत्रात्मक हुनुपर्छ, समाज परिवर्तनको सन्देश हुनुपर्छ, पाठकलाई भनन्न पार्ने हुनुपर्छ, केही गरौं गरौं, केही भनौं भनौं, केही न केही सल्याङ्बल्याङ गर्नुपर्छ...
प्रेम हरेक जीवनको अनिवार्य शर्त हो । विनाप्रेम जीवन त के यो सृष्टि पनि सम्भव छैन । तर, प्रेमबारे पनि अनेकौँ बुझाइ छन्, अनेक व्याख्या र परिभाषा छन् । तथापि, प्रेम प्रेम हो र प्रेमभन्दा पर यसको कुनै अर्थ र...
साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपाली साहित्यका विशिष्ट प्रतिभा हुन् । यिनको जन्म वि.सं. १९७१ भाद्र २३ गते वाराणसीमा भएको थियो । पिता खरदार कृष्णप्रसाद कोइराला र माता दिव्यादेवी कोइरालाका गर्भबाट जन्मेका कोइरालाको न्वारनको नाम चूडामणि कोइराला राखिएको थियो । पछि यिनलाई...
नेपाली साहित्यका आदिकविका रूपमा परिचित भानुभक्त आचार्यको २०७औँ जन्मदिन हो भोलि अर्थात् २९ असार । नेपाली समाजमा कवितालाई लोकप्रिय बनाउने, जनजिब्रोमा झुन्डिने श्लोकहरू लेखेर छन्दलाई प्रिय बनाउने कवि हुन् आचार्य । उनको विशेषगरी वाल्मीकि रामायणको नेपालीमा अनुवाद नै प्रमुख कार्य...